Amaanka Muqdisho oo la adkeeyay iyo Wadooyinka Muhiimka ah oo xiran. – Hornafrik Media Network
Amaanka Muqdisho oo la adkeeyay iyo Wadooyinka Muhiimka ah oo xiran.
By HornAfrik	 On Jun 9, 2018
Hornafrik-Dowladda Soomaaliya ayaa kordhisay Ciidamada sugaya amaanka Magaalada Muqdisho waxaana meel walba taagan Ciidamo Baaraya Gaadiidka iyo dadweynaha kuwaas oo su’aalo weydiinaya dadweynaha ku nool gobalka Banaadir.
Ciidamada ayaa la dhigay dhamaan wadooyinka muhiimka ah ee magaalada Muqdisho, waxaana isticmaalka wadooyinkaas loo diiday Gaadiidka dadweynaha, kaliya waxaa isticmaalaya qofkii heysato aqoonsiga Dowladda iyo Safaaradaha ajaaniibta ah.
Arintaan ayaa si sax ah loo ogeyn waxa sababay balse waxaa jirta si guud taxadar iyo feejignaan ku aadan in Al-shabaab ay weeraro ka fuliyaan magaalada Muqdisho inta lagu gudo jiro maalmaha Bisha Ramadaan.
Magaalada ayaa ilaa hadda waxaan ka dhicin dagaal iyo Qarax midna balse waxaa kordhay dilalka ay fuliyaan Kooxo ka tirsan Daacish iyo Al-Shabaab, tirada dadka ku dhintay Muqdisho Bishaan Ramadaan ayaa lagu qiyaasaa ku dhawaad 100 qof oo shacab iyo Ciidan ubadan.
Dowladda Soomaaliya oo Bank-ga Aduunka ka heshay in kabadan Boqol Milyan oo Dollar.